एकजना छात्र अथवा छात्रा परीक्षामा विफल हुँदै उनको जीवन अन्धकार हुँदैन किम्वा मुल्यहीन हुन जाँदैन । सरकारी जागीरको बाटो कोरि रहेको भाई अनि बहिनीको जागीर नमिल्दै के जीवन खेर गयोत? यदि कसैले यस्तो सोच पाल्नु गर्नु भएको छ भने त्यो आजै बाहिर निकाल्नु होस्। एउटा असफलतामै जीवनलाइ नकारात्मक मुल्याङ्कन गर्नु हुन्छ भने तपाईं मानसिक रोगको शिकार हुने अत्यन्त संवेदनशील कारकको पछेउरीमा हुनहुन्छ। मनोविज्ञानी यसै भन्ने गर्दछन् । किनभने हामीले हाम्रो असफलतालाइ नियालेर सफलताको बाटो फेरि पनि कोर्ने प्रयास गरिएन भने के जीवन देखि भागेर हिँडने त?
अरू कुनैले आफ्नो खुशी दिन्छन भनी आशा गर्नु अथवा आफ्नो मूल्य अर्काको हातमा सुम्पिएर कहिल्यै खुशी हुँईदैन । गर्लफ्रेन्डले छोडेर गई भन्दै अथवा कसैले नराम्रो भन्दै आफ्नो जीवन असफल भयो भनेर सोचनेहरूको निस्तार छैन यो धरतीमा। अर्कोले के भन्छन् भनेर सोचनेहरू सदैव मानसिक रूपमा बिरामी रहन्छन्। तपाईंको जीवन तपाईंलेनै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अर्काले के भन्छन् भनेर टाउको नघिस्याउनु। भन्ने हरूलाई भन्न दिनु के भन्छन्। आफ्नो मनपर्दो कामहरू चिन्नु हुन्छ भने त्यो अँगालेर अगिबढनू होस् त्यसैले तपाईंलाइ खुशी र सफलता दुइटै निश्चित रूपमा दिन्छ।
दु:ख पाँउदा टाढाबाटै राम भन्छन् काधँ लाउने पाईन्छ त? पायौ भने उनीहरू सँग जीवन चर्चा गर्नुहोस् मूल्याङ्कन होइन। दु:खको होस् सुखको होस् जीवन केवल तपाईंको हो। विफलताको कारण नियालेर फेरि अघिनै बढनु पर्छ। नत्र के हारेर अनुहार लुकाउनेत ? हामी मानिसहरूमा प्रचण्ड शक्ति हुन्छ नियतिलाई टार्ने, विफलतालाइ धनात्मक रूपमा नियालेर, अर्काको मूल्याङ्कनबाट आफुलाइ टाढा राखि जीवनलाइ फेरि नयाँ रूपमा सजाउने। यसरि एउटा पछि अर्को जीवन सजाउने आफ्नो प्रयासले खुशी र सफलता दुइटै निश्चित रूपमा दिन्छ। विश्वास गर्नुहोस् तपाईंको खुशी तपाईंले बोलाउनु-अँगाल्नु पर्दछ ।